China Makomba eMoto eKunze,Imba Yemoto Huni Kutsva Round Star neMwedzi,Fireplace Poker,Spark Screen, yePanze Kuseri Kweseri Terrace Patio vagadziri uye vatengesi | THYH
Makomba eMoto eKunze,Gomba reMoto Kupisa Nyeredzi Yakatenderedzwa neMwedzi,Fireplace Poker,Spark Screen,yePanze Kuseri Kweseri Terrace Patio.
KUTEVEDZWA KWEKUTANGA: Pese uye kupi kwaunoshandisa moto uyu, kuchengetedzeka kunogara kuri pamberi.Yakasimba mesh dhizaini muchiratidziro uye cutouts inogona kudzivirira zvinobudirira sparks, marasha nemarara kubva pakubhururuka kunze kwemoto. Iyo 30 ″ kaviri kushandisa poker inobvumidza iwe kufambisa huni. kana marasha uye nekusimudza zvakachengeteka mesh skrini.Nezvidziviriro izvi, unogona kunakidzwa zvakachengeteka nekudziya kwegomba redu remoto rinounzwa kwauri.
KUYEDZA & KUNOGONA: 30 inch gomba remoto rakagadzirwa nepamusoro tembiricha poda yakavharwa simbi inoshingirira mamiriro ekunze. Dhizaini yakasimba ine nyeredzi uye mwedzi yakachekwa-pateni inovhenekera manheru ako uye inova nechokwadi chekugara kwemhepo kune moto wakawanda.
FAST SETUP CHESE: Hapana maturusi akaoma anodiwa! Kuiswa kunoreva mirairo yekushandisa kana vhidhiyo yekuisa yezvinyorwa.Yakanakira zviitiko zvekunze zvakaita semoto unopfuta, moto wemisasa, bbq yemhuri, kana kumisasa neshamwari. Mhete yekunze inobvumira kutakurika nyore kana yanyatsotonhorera pasi.Kupedza manheru anotonhora echando nevadikanwi vako vachiperekedzwa neiyi huni inopisa gomba remoto! Yakagadzirwa nesimbi isingadzivirirwe pendi, huni hunopisa gomba remoto rinogona kumira 752℉-1112℉.
ZVAKAWANDA KUCHENGETEKA: Tianhua Moto gomba rine chivharo chekudzivirira moto kudzivirira kuti pfarivari uye moto unopisa urege kupukunyuka. Moto mbiya inouyawo nechishandiso chekushandisa kukwenya huni kana kubvisa nyore mesh chivharo zvakachengeteka. 3 makumbo akasimba anovimbisa kugadzikana uye kutsigirwa kwehuni inopisa moto.
ENJOY NGUVA: Firepit yekunze yakanyatsokodzera kuti vanhu vakawanda vagare vakatenderedza moto papatio, yadhi kana gadheni.Overall 30″ diameter X 20″ yakakwirira X 8″ yakadzika,14″ kureba isina spark screen uye 26″ mukati dhayamita. Manheru anotonhorera, nemumhanzi unozorodza kana bhaisikopo repanze, zvinofadza sei kugocha mashmallow pasi pedenga rine nyeredzi rakatenderedza gomba rinodziya remoto kunze!
Zvakapfuura: Yakanyanya Kushanda Moto Grate Uye Tafura
Zvinotevera: 24 ″ x1.25 ″ SOLID STEEL MOTO GARE
Moto Gomba Huni Kupisa Round Star neMwedzi
Makomba Emoto Ekunze
yePanze Kuseri Kweseri Terrace Patio
OEM Sheet Metal Fabrication nyanzvi laser ...
General Kugona Kondirakiti Kugadzira OEM (Yekutanga Equipment Mugadziri) otomatiki Magonero CNC/Manual/Robotic Load/Kuburutsa Fabrication process Laser Kucheka/Kupeta/Kuumba/Kubaya/Welding/Painting/Powder Coating Rolling/Searing/Stamping/Plating/Hardware Asembly Inser Maitiro MIG/TIG/Arc/Chimuti Zvishandiso Aluminium/Stainless simbi/Galvanized steel/Brass/Copper Cold rolled steel/Hot rolled steel/Special requests Gauge size/hukobvu (Laser) 2...